အဆီကျပိန်ဆေးစစ်စစ်P57 အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: အဆီကျဆေး အရပ်ရှည်ဆေး အသားဖြူ.သားအိမ်ကျဉ်းဆေး
ဒီဆေးက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စရာမလို အစားလည်းလျှော့စရာရှောင်စရာမလိုပဲ တနေ့တလုံး သောက်ရုံနဲ့ တလ ၁၅ပေါင်ဝန်းကျင် ကျပါတယ်..
သဘာဝရှားဇောင်းပင်မှ ထုတ်လုပ်ထားလို့ လုံးဝဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိ တစ်ကိုယ်လုံးက အဆီမှန်သမျှ ချေဖျက်ပေးပါတယ်ရှင့်
ပေ့ထဲမှာ ၀င်ကြည့်ပါ. ပို့စ်အောက်က ကွန်မန့်တွေ ၀င်ဖတ်ပါရှင့် . အများထောက်ခံမှု အပြည့်ရထားပါတယ်.. ၀ယ်ချင်နေပီဆိုရင် ပေ့ကို အလည်လာနော်..
ပို့ခထပ်မပေးရဘူးနော် ....ဘယ်မြို့မဆို ပစ္စည်း ရမှ ငွေရှင်းလို့ ရပါတယ်.
ကျန်းမာရေး ကောင်းသူတိုင်း သောက်လို့ရပါတယ် ....
၀ိတ်ချဖို့ ဆို နောက်ရက် မရွေ့နဲ့တော့နော်